M/weyne Deni oo amray dilka 7 qof & Warar ka soo baxaya.
Boosaaso(P-TIMES) – Madaxweynaha Puntland Siciid Deni ayaa saxiixay toogashada 7 qof oo ay Maxkamadda ciidamadu ku heshay in ay ahaayeen xubno katirsan Daacish, AL- Shabaab, qarkoodna lagu helay sida maxkamaduhu sheegeen in ay geysteen dilal qorsheysan oo ka dhacay magaalada Boosaaso.
Madaxweyne Deni ayaa shalay saxiixay liiskan, waxaana kahor uu kulan gaar ah uu la yeeshay saraakiisha maxkamadda ciidamada oo ay ka wada hadleen xukunkan.
Maxkamadda ciidamada ayaa horey u xukuntay xubnahan oo ku eedeysanaa in ay katirsanaayeen Daacish, Al- Shabaab iyo dilal ay horey u geysteen, waxaana subaxnimadii hore ee maanta wararku sheegayaan in dilkan lagu fuliyey.
Waa markii 2aad oo Madaxweynaha Puntland uu saxiixo dilka xubno katirsan kooxaha Argagixiso, tan iyo markii uu Xaafiiska la wareegay waxaana uu noqonayaa Madaxweynihii ugu saxiixa badnaa ee dadka Maxkamaddaha ciidamadu xukunka ku ridaan.